'I-AVATAR: ABADALI BE-AIRBENDER YOKUGQIBELA' BAVEZA UKUBA BAYEKE UTHOTHO LWENETFLIX - IINDABA
'I-Avatar: Abadali be-Airbender yokugqibela' baveza ukuba bayeke uthotho lweNetflix
I-Avatar: Abadali be-Airbender yokugqibela uMichael Dante DiMartino kunye noBryan Konietzko ngoku abanamdla wokuziqhelanisa nokwenza ngabom kolu ngcelele lweNetflix.
Uninzi lwenu kusenokwenzeka ukuba belundibuza ngohlaziyo ngokubhekisele 'kuthotho lwe-Avatar' ye-Netflix, UDiMartino ubhale ileta evulekileyo kwiwebhusayithi yakhe kwangoko ngoLwesithathu. Okokugqibela ndinokukwazisa ukuba ngoku andikhathali ngesithembiso. NgoJuni wale yr, emva kweminyaka emibini yomsebenzi wokukhula, mna noBryan Konietzko kwaye ndenza isigqibo esisiso sokushiya imveliso.
UDiMartino uqhubeke wathi xa yena noKonietzko batyikitya okokuqala ukwenza uthotho iNetflix yazinikezela ekusebenzeni nabo kwiingcinga zabo nakwingqangi yabo yomboniso. Ngelishwa, imiba ayizange ihambe njengoko sasinethemba, wabhala.
Jonga, imicimbi iyenzeka. Ukuveliswa kunzima, uqhubeke. Kuvela amatyeli angalindelekanga. Izicwangciso kufuneka zahluke. Kwaye xa le micimbi yenzekile kwiimeko ezahlukeneyo kulo lonke ubuchwephesha bam, ndizama ukufana ne-Air Nomad kwaye ndiziqhelanise. Ndenza konke okusemandleni am ukutyibilika, ayinamsebenzi ukuba yeyiphi na imiqobo ebekwe kwindlela yam. Kodwa nditsho ne-Air Nomad iyazi xa ilixesha lokusika ilahleko kunye nokudlulisela kuyo.
Uye waphinda waqinisekisa abalandeli ukuba ukhathazekile ngaphakathi kwindalo yonke ye-Avatar, ethe yabona ulwazi oluhlaziyiweyo okoko i-Airbnb yokugqibela yajika yafumaneka kwiNetflix, kunye neLegend kaKorra emiselwe ukuyibetha kule veki.
Ngubani owaziyo? Ukulungiswa kokusebenza kweNetflix kweAvatar kunokuba nakho ukulunga, wabhala. Isenokuba ngumboniso wokufumana kwakho ukonwaba kunye. Kodwa into endinokuqiniseka ngayo kukuba nokuba yeyiphi na imodeli ekugqibeleni ephela kwiscreen, ayizukuba yile nto mna noBryan besikhe sayicinga okanye besifuna ukuyenza.
Uvale ngokucaphula umlinganiswa womdlalo u-Iroh, owathi, Ngamanye amaxesha ubomi bufana neli tonela limnyama. Awunakho ngalo lonke ixesha ukubona ukukhanya kwelanga kugqityiwe kwitonela, nangona kunjalo xa ubambe ukuhambisa uza kuza kwindawo enkulu.
INetflix ayiphendulanga kwangoko Ezahlukeneyo 'Isicelo sokubeka izimvo.
Imodeli ye-live-action ye-hit Nickelodeon animated uthotho ya-odolwa okokuqala kwi-Netflix ngo-Septemba ka-2018. Amabhaso ka-Annie, amabhaso eGenesis, ibhaso le-Primetime Emmy, kunye neMbasa yePeabody. Uthotho lwee-sequel, iThe Legend of Korra, idlalwe ngamaxesha ama-4 ukusuka ngo-2012-2014.
Izigaba: Hollywood Iwiki Umqala
jack wagner kunye nenkosikazi
nikolaj coster-waldau oothixo baseyiphutha
Isangqa seArctic sexesha lesi-2
i-usps yokusebenzela i-kiosk locator
Ngubani ixesha lekhisimusi eve
imeyile ngosuku lwe-mlk